Naya Drishti | कार्यकालको १ हजार दिन पुगेको सन्दर्भमा विप्लव बारे प्रधान सेनापति थापाले के भने ? - Naya Drishti कार्यकालको १ हजार दिन पुगेको सन्दर्भमा विप्लव बारे प्रधान सेनापति थापाले के भने ? - Naya Drishti
कार्यकालको १ हजार दिन पुगेको सन्दर्भमा विप्लव बारे प्रधान सेनापति थापाले के भने ?
जेठ २३, काठमाडौं । प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विप्लव समूह भविष्यमा फेरि द्वन्द्वको बाटोतिर नजाने सेनाको विश्वास रहेको बताएका छन् ।
कार्यकालको एक हजार दिन पूरा भएको अवसरमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै थापाले सरकार र विप्लव समूहबीच भएको वार्ताले मूर्तरुप लिने पनि विश्वास व्यक्त गरे ।